Ifulethi elithokomele e-Lambagny eliseduze nakho konke - I-Airbnb
Ifulethi elithokomele e-Lambagny eliseduze nakho konke
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Marie Laurence
U-94% wezivakashi zakamuva unikeze u-Marie Laurence izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
U-Laurence no-Brigitte bakujabulela kakhulu kuleli fulethi elibukekayo kalula.
Itholakala e-lambagny eduze nesikhungo sokuthenga kanye ne-Terrainussal ecacile.
Indawo enogqozi nenomdlandla, uzoba nazo zonke izitolo eziseduze.
Lapho ufika, uzothola indawo yokungena encane, igumbi lokuhlala, ikamelo lokulala, i-TV enamashaneli amaningana kanye ne-balcony.
Vele ubeke i-suitcase yakho phansi futhi ujabulele ukuhlala kwakho! Akunankinga, konke kuyatholakala
Okwenza le ndawo ihluke iqiniso lokuthi ayinayo ikhishi langaphakathi, kodwa ungakhathazeki, uzothola enye indlela yokupheka. Uvulandi omncane unefenisha enawo wonke amasevisi adingekayo okupheka. Kahle uzothola ukudla okuhlukile okuwukuthi usho kubantu base-Afrika ukuze ushintshe ukuphila okuncane kwansuku zonke.
Ngakho-ke uzoba namalahle akho alahlwayo, indawo yokubasa umlilo - uhhavini - ukufana kanye nezicimamlilo njll... uhlobo olujwayelekile lokudla kwase-Guinean, yini engaba ngcono kule ukunambitheka kokudla okuphekwe ngomlilo wezinkuni??? Phuma endaweni yakho yokunethezeka, ungene ujule ngokugcwele kulesi siko esihle sase-Guinean. Lena yinto ejabulisayo engabonakali, kumelwe siyiphile ngempela.
Ngaphandle kwekhishi, konke kusezandleni zakho ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi.
Ukunaka : Ngenxa yezimo zamanje zase-Guinea, ayikho i-inthanethi endaweni yokuhlala. Kodwa ungathenga ukudlula kosuku, noma masonto onke noma nyanga zonke ngesikhathi sokuhlala kwakho! Okudingekile kwenziwa ukuhlomisa indawo yokuhlala ngokuxhumeka ku-inthanethi.
Ifulethi lise-Lambagny. I-Lambagny iyindawo enogqozi nenomdlandla. Uzothola izitolo eziseduze kanye nenxanxathela yezitolo...
Ibungazwe ngu-Marie Laurence
Nganoma yimiphi imibuzo phakathi nokuhlala, ngihlala ngedwa ukuze ngikunikeze izimpendulo. Ngakho unganqikazi!!!
Hlola ezinye izinketho ezise- Conakry namaphethelo